Abatshakazi bothuse umzi kwibhola yabaselula – Grocott's Mail
You are at:Home»SPORT»Abatshakazi bothuse umzi kwibhola yabaselula
Abatshakazi bothuse umzi kwibhola yabaselula
By Grocott's Mail Reporters November 20, 2019 No Comments2 Mins Read
Bathontelene abathandi bebhola benjenjeya bejongise imibombo kumabala ase JD Dlepu nalapho bebeyokuxhasa abadlali abaselula kulempela veki esisuka kuyo.
Imozulu ebinomoya obubhudla ngamandla ukhatshwa yintwanana yenkwankca ayibathibazanga abadlali kwiinzame zabo zokubonakalisa ngesakhono sabo. Kwimidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithathu iLakhenathi izixhwithele kwiJoza Callies ngamanqaku amathathu kwelinye logama yona iCity Pirates ibhaxabule iEluxolweni ngamanqaku amathandathu eqandeni, yaze yona iNew Seekers yazibethela abakhaya bayo iFingo United ngamahlanu kwelinye.
IAfrican Spears ibethe iFuture Stars ngamabini eqandeni logama iSakhulutsha itywatyushe iCameroon ngamanqaku amahlanu eqandeni. Abatshakazi iBlack Stars yothuse umzi ngethuba ilalisa iGolden Brothers ngelinye eqandeni logama iSophia Stars ibethe iMaru ngamanqaku asibhozo eqandeni, yaze yona iYoung Eagles yabhaxabula iGrahamstown United ngamathandathu eqandeni.
Kukhangeleka ngathi usemninzi kakhulu umsebenzi osafuneka wenziwe ngamagosa awongamele ibhola yaba baselula nanjengoko kukho izinto ezimbalwa ezifuna ukulungiswa kwangoku zingekaqatseli. Enye yazo kukunganyaniseki kwamaqela ngeminyaka yabadlali okukhwinisa abaqeqeshi umhla nezolo, nalapho kufumaniseka ukuba kulula kakhulu ukudlalisa abadlali abadala nanjengoko kungekho ndlela iyiyo yokubabhaqa xa besenza lo mkhwa, bencediswa ngabaqeqeshi babo kumaxesha amaninzi.
Okwesibini kuye kuthathwe nabanina anikwe impempe aphathe umdlalo kwaye ndizibonele ngokwam amaqela amaninzi ephulukana nemidlalo ngenxa yokungakhathali koosompempe abarhiwulwa pha ebaleni.
Ukuba iMakana LFA izimisele ngophuhliso lwebhola yalapha eMakhanda kufanele iqale iqiniseke ukuba kutyalwa imbewu eyiyo pha ezantsi, iqale ngokuthi ibonakalise inkathalo kolu khuphiswano lwalamakhwenkwe aselula.
Kukho umdlali odlale kumaqela amabini ukuya kwisithathu ohlukeneyo kwa kolukhuphiswano, nto leyo ebonakalisa ukungahoyeki ncam kolukhuphiswano lwabaselula. Ukuthathelwa ingqalelo ngokukhawuleza kolukhuphiswano lwabaselula kuyakunceda ekuthinteleni intlekele eyakuthi ihle ngenye imini.
Masithembe ukuba akuzolindwa kude kubekho elinye lamaqela amakhulu achatshazelwa yilemeko phambi kokuba ilungiswe. Nazi ezinye iziphumo zabo baneminyaka engaphantsi kwelishumi elinesihlanu:
Lakhenathi 5-1 Callies
Y. Eagles 7-0 Gtown Utd
New Seekers 3-1 Fingo
C Pirates 6-0 Eluxolweni
Golden Bros 4-1 B Stars
Previous ArticleGetting up again
Next Article New Years Cup action beckons